Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Nihetsika avy hatrany ny minisitry ny fizahan-tany any Sierra Leone Pratt mba hitazomana ny COVID-19 hivoaka
Any Sierra Leone, toy ny tena izy amin'ny faritra manerantany, ny fizahan-tany no indostria mandratra indrindra rehefa miady amin'ny valanaretina Coronavirus manerantany.
Tsy misy toerana marefo toy ny kaontinanta afrikanina. Tsy manana ny enti-manana i Afrika, ny fotodrafitrasa hiadiana amin'ny valanaretina amin'ny ambaratonga COVID-19. Ny Hon. Ny minisitry ny fizahan-tany sy ny kolontsaina ho an'ny firenena Afrikana Andrefana, Sierra Leone Dr. Menunatu B. Pratt dia niasa mafy nanangana ity indostria ity ary nahafantatra izany. Efatra andro lasa izay, nolavin'ny firenena ny fidirana efatra Mpizahatany japoney mankany amin'ny firenena bnoho ny tahotra ny COVID-19.
Sierra Leone dia miatrika tranga trangan-javatra mety mbola tsy voamarina fa trangana virus voalohany azo atao any Freetown, renivohitry ny firenena.
Sierra Leone hatreto dia afaka nitazona ny COVID-19 tsy ho any amin'ny fireneny. Raha tsy nisy ny valanaretina, nampandrenesin'ny minisitera ireo mpandraharaha ny toeram-pizahantany, ao anatin'izany ny bar amoron-dranomasina, klioban'ny alina, trano filokana ary toerana fialamboly rehetra mba hanararaotra ny asany haingana mandra-pahatongan'ny manaraka. Ny trano fisakafoanana kosa avela miasa manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 hariva. Voarara ihany koa ny hetsika amoron-dranomasina mifandraika amin'ny festival festival fiestas sy endrika hafa amin'ny fiaraha-mikorana amoron-dranomasina.
Ny toeram-pizahantany rehetra dia amporisihina ihany koa hametraka ny fepetra fanatsarana manohitra ny coronavirus.
Nanampy ny minisitra Pratt: "Noraisina ny fepetra mba hiarovana hatrany an'i Sierra Leone."
Nasongadin'ny minisitra ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany azy ireo mba hijery ny elanelana ara-tsosialy, hamono otrikaretina hotely, hipetraka eny ivelan'ny trano fa tsy ao anaty trano, manasa tanana ary manamarina ny hafanan'ny tsirairay.
Ny minisitra dia mifandray tsara amin'ny tontolon'ny fiarovana sy ny faharetana amin'ny fizahan-tany.
Cuthbert Ncube, filohan'ny fizahantany afrikanina nidera ny hetsika teo noho eo ny Hon. Ny minisitra Pratt dia niaro ny dia sy fizahan-tany any amin'ny fireneny. Sierra Leone dia mpikambana mpanorina ao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina. Ny Minisitra Pratt dia nanome ny fitarihana sy ao anatiny hatramin'ny nananganana ny ATB ary eken'ny besinimaro ho mpikambana manan-danja amin'ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany. Fantatray fa nanohana be tao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany i Sierra Leone ary manana drafitra lehibe amin'ny ho avy.
Birao fizahantany afrikanina dia nivoaka nanohitra ny COVID-19 rehetra ary nanentana ireo firenena mba tsy hametraka tombony amin'ny fotoana fohy noho ny fahaverezana maharitra. Nangataka tamin'ny firenena ny fikambanana mba hanakatona ny fizahan-tany, hanidy ny sisin-tany ary hipetraka.
Fiaramanidina mpandeha Aeromexico ho an'ny karatra: valiny amin'ny vonjy taitra COVID-19